I-LibreOffice: Intshayelelo kwiNdibaniselwano yoMsebenzisi oPhambili-Isifundo 1 | Ukusuka kwiLinux
Ukufaka i-Linux Post | 15/05/2022 06:00 | Izicelo, Izifundo / iincwadi / Iingcebiso
Xa sipapasha ulwazi malunga Ulwabiwo kunye nezicelo, sikholisa ukujongana neendaba zakho okanye izehlo zobuchwepheshe. Khange sijonge kusetyenziso lwemihla ngemihla njengabasebenzisi bazo, kuba iya kuba yinto ebanzi kwaye intsonkothile. Ngokuqhelekileyo, sijongana nawe khuphela kwaye ufake ngeyona ndlela ineenkcukacha kunye nezobugcisa. Nangona kunjalo, sikholelwa ukuba eyona isetyenziswayo neyaziwayo Iofisi esimahla nevulekileyo kwi-GNU/Linux, fowuni LibreOffice, ifanele ulwazi olukhethekileyo malunga nokuba injani ngokwenene ngaphakathi kwiinguqulelo zayo ezintsha kunye nendlela esetyenziselwa ngayo imisebenzi yemihla ngemihla.
Ngesi sizathu, esi sifundo sokuqala kunye nezinye ezininzi ezilandelayo ziya kujolisa ukugubungela oko umsantsa omkhulu wamaxwebhu ngaye ngaphakathi kweofisi, kuthotho lwayo lwangoku (7.X) ukuya "Ukwazi iLibreOffice" ngakumbi nangcono.
I-Suite yeOfisi yeLibreOffice: Into encinci yayo yonke into ukuze ufunde okungakumbi ngayo
Kwaye njengesiqhelo, ngaphambi kokungena ngokupheleleyo kwisihloko sanamhlanje esizinikezele ekuhambeni "Ukwazi iLibreOffice", siya kubashiyela abo banomdla amakhonkco alandelayo kwezinye iimpapasho ezinxulumene nangaphambili. Ngendlela yokuba banokuziphonononga ngokulula, ukuba kuyimfuneko, emva kokugqiba le mpapasho:
"ULILibreOffice Office Suite sisixhobo sekhompyutha esikhuthazwayo, esiphuhliswe kwaye sisetyenziswa kakhulu luluntu lweSoftware yaSimahla, uMthombo oVulekileyo kunye neGNU/Linux. Ukongeza, yiprojekthi yombutho ongajonganga ngeniso ebizwa ngokuba yi: The Document Foundation. Kwaye isasazwa simahla kwiifomati ezi-2, ezihambelana nohlobo lwayo oluzinzileyo (elisesesebe) kunye noguqulelo lwayo lophuhliso (isebe elitsha), ngeepakethe ezahlukeneyo zofakelo lweplatform (iWindows, macOS kunye neGNU/Linux) ngenkxaso ebanzi yeelwimi ezininzi (iilwimi )”. I-Suite yeOfisi yeLibreOffice: Into encinci yayo yonke into ukuze ufunde okungakumbi ngayo
I-LibreOffice 7.2 ifika ne-GTK4, iWebhu yeNgqungquthela, utshintsho kunye nokunye
Isiza esitsha seLibreOffice sifuna ukutsala abantu abatsha abaninzi kwiLibreOffice kunye noluntu oluvulekileyo
1 Ukwazi iLibreOffice: Ukusetyenziswa kokufundisa
1.1 Ukwazi ujongano lomzobo olwamkelekileyo lokuqala
1.1.1 Ibar yeMenu: Ukhetho
1.1.2 Ibar esecaleni: Ukhetho
1.2 Inkxaso kunye nentsebenziswano kunye neLibreOffice
Ukwazi iLibreOffice: Ukusetyenziswa kokufundisa
Ezi zifundo zincinci zinenjongo, i Cacisa ngendlela elula necacileyo imiba ethile, iimpawu kunye nokusebenza kwe LibreOffice. Ngaloo ndlela abantwana, abantu abadala kunye nabantu abadala baya kuyazi ngcono kwaye bakhuthazeke ukuba bafunde ngayo, kwaye bayinike ixabiso elikhulu elifanelwe njengeyona nto iphambili. Isimahla kwaye ivule i-GNU/Linux Office Suite.
Ukwazi ujongano lomzobo olwamkelekileyo lokuqala
Xa usenza i- Suite yeOfisi yeOfisi yangoku (uthotho 7.X) i isikrini sokuqala (ujongano olwamkelekileyo) kubonakala kulandelayo:
Kwaye iqulethe ezi ndlela zilandelayo zokusebenzisa:
Ibar yeMenu: Ukhetho
Ibar esecaleni: Ukhetho
Vula ifayile: Ukukhangela kwaye uvule ifayile yeofisi yendawo, oko kukuthi, ngaphakathi kwikhompyuter.
Iifayile ezikude: Ukukhangela kunye nokuvula ifayile yeofisi ekude, oko kukuthi, ngaphandle kwekhompyuter. Oku kubandakanya ukucwangciswa koxhumo olukude oluxeliweyo, olunokuthi lube lolu hlobo lulandelayo: I-Google Drive, i-OneDrive, i-Alfresco 4/5, i-IBM FileNet P8, i-IBM Connections Cloud, i-Lotus Quickr Domino, i-Nuxeo 5.4, i-OpenDataSpace, i-OpenText ELS 10.2.0 , I-SharePoint 2010, i-SharePoint 2013, enye iNkonzo ye-CMIS, i-WebDAV, i-FTP, i-SSH kunye ne-Samba.
Amaxwebhu Akutsha nje: Bona uluhlu lwamaxwebhu okugqibela avuliweyo.
Izikhokelo: Ukuvula nokusebenzisa uMbhali, Impress, Calc kunye neDraw iitemplates kuphela, okanye ulawule (ukuhambisa, ukungenisa kunye nokuthumela ngaphandle) zonke kunye.
Uxwebhu loMbhali: Ukuqala uxwebhu olutsha lokubhaliweyo, isimbo se-MS Word.
incwadi yecalc: Ukuqalisa i-spreadsheet esitsha, isimbo se-MS Excel.
Ukunikezelwa kweMpress: Ukuvelisa iphepha elitsha loyilo lwegraphic, isitayile seMS PowerPoint.
zoba umzobo: Ukuqalisa umzobo omtsha okanye uyilo, uMshicileli weMS kunye nesimbo se-MS Visio.
ifomula yemathematika: Ukwenza iphepha elilungele ukubhalwa kweefomyula zemathematika.
Isiseko seDatha: Ukuvelisa i-Database (BD), kwisimbo sokuFikelela.
Iqhosha loncedo: Ukuvula uncedo lwe-intanethi (i-Intanethi) ye-LibreOffice.
Iqhosha lezandiso: Ukuvula ivenkile ekwi-intanethi yeZandiso.
Inkxaso kunye nentsebenziswano kunye neLibreOffice
"Izikhokelo ezisemthethweni zeLibreOffice zidityaniswa liqela lamavolontiya. Ngaphandle kwento yokuba uluntu oluthetha isiSpanish lolona lukhulu emhlabeni kwaye lolona lukhoyo kwi-Intanethi, iqela lamavolontiya alungiselela uxwebhu ngeSpanish kwiLibreOffice lelinye lawona malungu ambalwa kwiLibreOffice. uluntu. Ukuba oku akusebenzi kuwe, joyina iqela le-LibreOffice". Kutheni singekho isikhokelo sale mihla kwiLibreOffice?
Ngamafutshane, hamba "Ukwazi iLibreOffice" kancinci kancinci ngezi izifundo ezincinci, ngokuqinisekileyo uya kwenza ezininzi, zombini malunga GNU / Linux, njengabanye Iinkqubo zokusebenza, uzive ukhuthazwa ngakumbi ukuba ufunde, uvavanye kwaye usebenzise ngendlela elunge ngakumbi Multi-platform ofisi suite. Ekubeni, nangona kukho ulwazi oluninzi olusemthethweni malunga nalo, ngokubanzi, aluhambelani neenguqulelo zanamhlanje. Ke, le mixholo ngokuqinisekileyo iya kuba ngumphelelisi olungileyo koku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukusuka kwiLinux » Izicelo » Ukwazi iLibreOffice: Intshayelelo kuMsebenzi ophambili woMsebenzi
I-OpenMediaVault: Inguqulelo entsha yesi-6 yeDistro ukwenza iiSeva zeNAS